သာယာအေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်လေး တစ်အိမ်ကို ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ကျွန်မတို့တစ်တွေ တည်ဆောက်ကြရအောင် | Radio Veritas Asia
ဒီတပတ်မှာတော့ '' #သာယာအေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ #အိမ်လေး တစ်အိမ်ကို ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ကျွန်မတို့တစ်တွေ တည်ဆောက်ကြရအောင် '' ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနေ့မှာ Home sweet home လို့ခေါ်ကြတဲ့ သာယာအေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်လေး တစ်အိမ်ကို ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ကျွန်မတို့တစ်တွေ တည်ဆောက်ကြရအောင်
ပရိသတ်ကြီးရှင့် အဲဒီအိမ်မှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေက ကောင်းမွန်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးကို စုစည်းပေါင်းစပ်ပြီးမှသာ Home sweet ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ရင် Home sweet home ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။
ကျွန်မတို့ချစ်တဲ့အိမ်ဆိုတာ အိမ်နားနီးချင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်တယ်။ အဲ့ဒီအိမ်တည်ရှိတဲ့ မြို့(ဝါ)ရွာကို ချစ်တယ်။ မိမိရဲ့ အိမ်တွင်းမိသားစုဝင်တွေကို ချစ်ကြတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာ တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အိမ်ဟာ မိမိစိတ်ကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပြီး ပျော်ရွှင်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။
အဲ့ဒီအိမ် Home က မြို့ရဲ့အပြင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် apartment ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျေးရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာမှာပဲ တည်ရှိနေပါစေ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အားထုတ်မှုတွေနဲ့ ခံစားချက်တွေက ပေါ့ပါးလွတ်လပ်နေမယ်ဆိုရင် မိမိအသည်းနှလုံးမှာ ရှိနေတဲ့နေရာက Home လို့ခေါ်ရမှာပါပဲ။
စိတ်ခံစားချက် စံထားလောက်တဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ မိမိရဲ့သာမန် အတွေးလေး တွေနဲ့ မိသားစုဝင်အချင်းချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုတွေပေးမယ်။ မိမိနေတဲ့အိမ်က ကြီးကျယ်ခမ်းနားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သေးငယ်ချို့တဲ့တဲ့ အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့အိမ်ကို တန်ဘိုးရှိအောင် နေထိုင်တက်မယ်။ ဥပမာ- ခင်ပွန်းနဲ့ဇနီး မိဘနဲ့သားသမီး၊ သားသမီးအချင်းချင်း နားလည်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားရင် မိမိအိမ်က home sweet ဖြစ်လို့နေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သားသမီးကို မိဘကအော် ဟစ်ကြိမ်းမောင်းတာ၊ ငေါက်ငန်းတာတွေမရှိပဲ၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေမရှိရင် Home sweet home ကို တည်ဆောက်လို့ ရပါပြီ။ အိမ်သားတွေ အချင်းချင်းထိခိုက်နစ်နာအောင် အချင်းချင်းပြုလုပ်နေရင်တော့ home sweet home ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ မိသားစုဝင်အချင်းချင်း ကျေးဇူးဥပင်္ကာရတင်ရှိကြမယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လိမ်ညာတာတွေမရှိပဲ အမှန်အကန်စကားကို ပြောရမယ်။ တည်ကြည်ပြီး ဖြောင့်မတ်တဲ့ အပြုအမူတွေပြုမူကြရမယ်။ ဟာသတွေ ပြောကြပြီးစိတ်သက်တောင့်သက်သာ ရှိအောင် နေကြရမယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းအတူလုပ်ကြတာ၊ ကခုန်တီးမှုတ်၊ သီးချင်းဆိုကြတာ ဒါတွေက မိမိကိုယ်မိမိ ပျော်ရွှင်ဖို့ ခေါ်ဆောင်သလို မိသားစုဝင်အားလုံးလည်း ပျော်စေတော့ ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်လေး (happy home) လေးဖြစ်သွားစေတာပါပဲ။ အဓိကတော့ positive communication ဖြစ်နေရပါမယ်။
ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝရဖို့ ပုံမှန်အတူတကွ မနက်စာ၊ ညစာစားကြတာ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ T.V ကို အတူတကွ ကြည့်ကြတာ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး လျှို့ဝှက်ချက်တွေ မထားကြတာတို့က မိသားစုတွေအတွက် ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးစေတဲ့သဘောတွေပါ။ စိတ်သက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါတွေက မိသားစုဘဝ ပျော်ရွှင်မှုရစေဖို့ အဓိကသော့ချက်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
ပရိသတ်ကြီးရှင့်၊ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်အချင်းချင်း positive communication ဖြစ်ဖို့ လိုသလို ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နားနီးချင်း ကိုယ့်ရဲ့ community ဘဝရဲ့အပြုံးမျက်နှာနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံ ကြရတာဟာလည်း မိမိနေထိုင်ရမဲ့ အရပ်ပဲမဟုတ်ပါလား။
မိမိက အပြင်သွားပြီးပြန်လာရင် မိသားစုဝင်က ဆီးကြိုတာ၊ ဥပမာ- ခွေးရှိရင်လည်း ခွေးလေးက အမြီးနံ့ပြီး ကြိုဆိုတာ မိသားစုနေတဲ့ အိမ်ဆိုတော့ ဟင်းချက်တဲ့ ချက်ပြုတ်တဲ့အနံ့တွေ စကားပြောတဲ့ အသံတွေ မရှိရင်ဒါက home မဖြစ်တော့ပါဘူး။ house လို့ပဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Home ဆိုတာကတော့ မိသားစုတွေရှိတဲ့နေရာ၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆုံကြတဲ့ နေရာ၊ where memories are made and kept အမှတ်တရတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ သိမ်းဆည်းထားတဲ့နေရာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Happiness is when what you think.
What you do are harmony.
မိမိအတွေး၊ မိမိပြောဆိုမှုနဲ့ မိမိလုပ်ဆောင်ချက်တွေက မိမိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ စိတ်သဘောထား ညီညွတ်နေရင် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဖြစ်လာတာပဲလို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် ကိုယ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကို လုပ်မယ်။ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်မယ်ဆိုရင် မိသားစုဝင်တွေ Home sweet home ကို တည်ဆောက်နိုင်မှာပါဆိုတာ တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
#rvapastoralcare #Family #HomeSweetHome